सरकारी डाक्टरसंग लभ गरेर बिहे गर्दा बेहाल भयो लीलाको जिन्दगी, पत्निले फोन गर्दा म.रिसक्यो भन्ने ब्यक्ति को हुन् ? सरकारी डाक्टरले चुँडे लिलाको खुशी, हेर्नुहोस् भिडियो – Gazabkonews
सरकारी डाक्टरसंग लभ गरेर बिहे गर्दा बेहाल भयो लीलाको जिन्दगी, पत्निले फोन गर्दा म.रिसक्यो भन्ने ब्यक्ति को हुन् ? सरकारी डाक्टरले चुँडे लिलाको खुशी, हेर्नुहोस् भिडियो
जस्लाई जीवन सुम्पिईन् उसैले नै जीवनलाई घर नघाटको बनाईदिएपछि आखिरमा लिलाले पनि के नै गर्न सक्छिन् र ? तरपनि उनले जे जति गर्न सकेकी छन् त्यही गरिरहेकी छन् । आज उनको छोरा पनि ठूलो भएका छन् । छोराले प्लस टू पढ्ने भएका छन् । तर बाबुको अत्तोपत्तो छैन । लिलाका छोराले बाबुको नामको नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । बलिरामलाई लिलाले फोन गर्दा बलिराम म,रि,सक्यो । तपाईँले खोजको मान्छे हैन भन्ने जवाफ पाउँछिन् । भिडियोसहित